सुनचाँदी Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaperसुनचाँदी Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaper
काठमाडौं, ८ माघ । आज बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले आजका लागि तोकेको मूल्यअनुसार छापावाल सुन तोलामा नै ६०० रूपैयाँले बढेको छ । प्रतितोला ९२ हजार ५०० मा बुधबार कारोवार भएको छापावाल सुन आज भने ९३ हजार १०० रूपैयाँमा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ । यस्तै तेजाबी […]
काठमाडौं, ६ माघ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अनुसार सुनको भाउ तोलामा चार सय रुपैयाँले बढेको छ । सोमबार ९१ हजार ६ सयमा कारोबार भएको छापावल सुनको भाउ आज ९२ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । महासंघले आजका लागि तेजाबी सुनको भाउ ९१ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकेको छ । सोमबार ९१ हजार चार सय […]
आज ७ सय रुपैंयाले घट्याे सुनको मुल्य कति पुग्याे त ताेलामा !
काठमाडौँ, ४ माघ । नेपाली बजारमा साताको पहिलो दिन सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको मुल्य तोलामा ७ सय रुपैंयाले घटेर ९१ हजार ८ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तैगरी आज तेजावी सुनको मूल्य ९१ हजार ३ सय निर्धारण गरिएको जनाइएको छ । […]
आज पनि बढ्याे सुनको मुल्य कति पुग्याे त ताेलामा !
काठमाडौँ, २९ पुस । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मुल्य बढेको छ । मंगलबार तोलामा ९२ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मुल्य आज एक सय रुपैयाँले बढेर तोलामा ९२ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तैगरी आज तेजावी सुन तोलामा ९२ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको जनाइएको छ […]
काठमाडौँ, १६ पुस । नेपाली बजारमा बिहिबार सुनको मुल्य घटेको छ । बुधबार प्रतितोला ९४ हजार २ सयमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा एक सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९४ हजार १ सयमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तैगरी आज तेजावी सुनको मूल्य ९३ हजार ६ सय निर्धारण गरिएको जनाइएको […]
काठमाडौँ, ७ पुस । स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु ३०० ले ओरालो लागेको छ । छापावाला सुन प्रतितोला रु ९४ हजार ९०० मा कारोवार हुने गरी तोकिएको छ । छापावाला सुन सोमबार प्रतितोला रु ९५ हजार २०० मा कारोवार भएको थियो । यस्तै तेजाबी सुन आजका लागि प्रतितोला रु ९४ हजार ४०० मा […]